အရှုံးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲ ??? – Gentleman Magazine
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]အရှုံးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲ ???
အရှုံးတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရတဲ့အခါ ဘာလုပျမလဲ ???
အပွောနဲ့ အလုပျမှာ ဘာက ပိုလှယျလဲဆိုတာ အားလုံးသိပွီးသားပါ။ ဘယျအရာကိုပဲဖွဈဖွဈ လကျတှလေု့ပျရတဲ့အခါမှာ ကရြှုံးဖို့အလားအလာတဈခု ရှိနတေတျပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုကို စတငျလုပျဆောငျတယျ၊ ထငျထားသလို အလုပျမဖွဈဘူး။ စာအုပျတဈအုပျရေးတယျ။ ဘယျသူမှ စိတျမ၀ငျစားဘူး။ ကရြှုံးမှုဆိုတာ ဖွဈတတျတဲ့သဘောတဈခုပါပဲ။
ဒီနရော ကရြှုံးမှုနဲ့ ရငျဆိုငျတှလေို့ကျရတဲ့ လူအမြားစုက နောငျတတှရေလာတတျကွပါတယျ။ ငါတို့ ဒီလိုမလုပျခဲ့မိရငျကောငျးမှာပဲ၊ ဘာလို့မြား ဒီလိုလုပျခဲ့မိတာလဲ၊ ငါ ဘယျလောကျတောငျ အသုံးမကလြိုကျသလဲ စသဖွငျ့ နောငျတတှရေပွီး စိတျမလုံခွုံမှုနဲ့ စိုးရိမျကွောငျ့ကစြိတျတှေ မြားလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ဒုံရငျးအတိုငျးပွနျဖွဈသှားပွီး အဆိုးမွငျစိတျတှနေဲ့ နောကျတဈခါကွိုးစားကွညျ့မှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။
လူအမြားစုအတှကျ အောငျမွငျမှုရရှိဖို့ အကွီးမားဆုံးအတားအဆီးကတော့ ဘာကိုမှမကွိုးစားကွညျ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့က တညျရှိနတေယျ၊ ပုံမှနျဘ၀ကို ဖွတျသနျးတယျ၊ ထူးထူးခွားခွား ကှဲပွားတာတဈခုခုကို လုပျဖို့ အခှငျ့အရေးကို အသုံးခဖြို့ ဘယျတော့မှမစဉျးစားတတျကွပါဘူး။ သူတို့က တဈနပွေီ့းတဈနေ့ ပုံမှနျအတိုငျးပဲ ဖွတျသနျးခငျြကွတာဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ အတိတျမှာကရြှုံးခဲ့တာတှကွေောငျ့ နောကျတဈကွိမျကွိုးစားဖို့ စိုးရိမျထိတျလနျ့နတောကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိကမ်ဘာမှာ အအောငျမွငျဆုံးဆိုတဲ့ လူတှအေားလုံးဟာ ကရြှုံးမှုတှေ အမြားကွီးကို ဖွတျသနျးပွီးမှ ဒီနရောကို ရောကျလာခဲ့ကွတာပါ။ သူတို့ ဘယျလောကျထိ ဇှဲကောငျးကောငျးနဲ့ ရှဆေ့ကျခဲ့လဲဆိုတာက အံ့သွစရာပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ကရြှုံးမှုတှကေို လလေ့ာကွညျ့မယျဆိုရငျ သူတို့ ဘယျလိုတောငျရှငျသနျရပျတညျနိုငျခဲ့တာလဲဆိုတာကို တှေးမိပါလိမျ့မယျ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစုရဲ့ နာမညျကွီးသမ်မတတဈဦးဖွဈခဲ့တဲ့ အဗေရာဟငျ လငျကှနျးကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ သမ်မတဆိုတဲ့နရောကို မရောကျခငျမှာ ကရြှုံးမှုတှအေမြားကွီးရှိခဲ့တာကို တှနေို့ငျပါတယျ။ အောငျမွငျမှုတှလေညျး ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကရြှုံးမှုတှကေ သူ့ဘ၀ဇာတျကွောငျးရဲ့ အစိတျအပိုငျးအမြားစုပါပဲ။ ဒီကရြှုံးမှုတှကေပဲ အဗေရာဟငျလငျကှနျးဆိုတဲ့ ရာဇ၀ငျတှငျတဲ့ အမရေိကနျသမ်မတတဈဦးဖွဈအောငျ၊ ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈဦးဖွဈအောငျ လုပျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပွညျတှငျးစဈကို အနိုငျတိုကျနိုငျခဲ့တဲ့ ဗိုလျခြုပျ Ulysses S. Grant ဆိုရငျလညျး အရှုံးသမားတဈဦးဖွဈခဲ့ဖူးတာပါပဲ။ သူက မအောငျမွငျတဲ့ အိမျပှဲစား၊ လယျသမား၊ စဈသားတဈယောကျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သူ့အဖရေဲ့ သားရဆေိုငျမှာ လကျတိုလကျတောငျးအလုပျလေးတှပေဲ လုပျခဲ့ရပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျကဆိုရငျ သူ့ကို နိုငျငံသူရဲ့ကောငျးတဈယောကျဖွဈလာမယျလို့ ဘယျသူကမှ ထငျမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ပွညျတှငျးစဈကို နိုငျအောငျတိုကျပွီးတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ကို အောငျမွငျသူတဈယောကျအဖွဈ လူတိုငျးက မွငျလာကွပါတယျ။ တကယျလို့ သူသာ သားရဆေိုငျမှာပဲ ဘ၀ကို လကျလြှော့နခေဲ့မယျဆိုရငျ အိမျနီးခငျြးတှကွေားထဲမှာ သူ့အဖဆေိုငျက အခိုငျးအစတေဈယောကျဆိုတာထကျ ပိုမွငျလာမှာ မဟုတျပါဘူး။
အောငျမွငျမှုတဈခုကို တညျဆောကျပွီး နာမညျမကြျောလာခငျက ကရြှုံးမှုတှေ တသီတတနျးကွီးနဲ့ ရှငျသနျရပျတညျခဲ့ရတဲ့ သူရဲ့ကောငျးတှေ၊ အမြိုးသားတှေ အမြိုးသမီးတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အောငျမွငျမှုအကွောငျး ရေးထားတဲ့ စာအုပျတှကေို လလေ့ာကွညျ့မယျဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ကရြှုံးမှုတှကေ ပိုမြားနတောကို တှရေ့မှာ သခြောပါတယျ။
ကရြှုံးမှုရဲ့ အခကျခဲဆုံးအပိုငျးက ရှဆေ့ကျလှမျးနိုငျဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကရြှုံးမှုကနေ ရှကေို့ ဆကျလှမျးနိုငျပွီဆိုရငျလညျး အောငျမွငျမှုက ကြိနျးသပေေါကျစောငျ့ကွိုနမှော ဖွဈပါတယျ။
အတိတျက အောငျမွငျမှု ဒါမှမဟုတျ ကရြှုံးမှုကို ဖကျတှယျထားတဲ့သူတှအေားလုံးမှာ တူညီတာတဈခုရှိပါတယျ။ သူတို့အားလုံးက အတိတျမှာ ရှငျသနျနကွေသူတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ အနာဂတျကို အာရုံစိုကျထားဖို့ လိုပါတယျ။ ရှဆေ့ကျဖို့ကိုလညျး အာရုံစိုကျနိုငျရပါမယျ။ ဒါက နောကျတဈနရေ့ောကျပွီ၊ လုပျစရာရှိတာတှကေို လုပျရမယျဆိုတဲ့ စိတျမြိုးမှေးနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။
ကရြှုံးမှုနဲ့ ရငျဆိုငျနိုငျဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကတော့ ရှကေို့ဆကျတိုးဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈလှမျးတိုးဖို့ ဆိုတဲ့နရောမှာ –
နောကျထပျ စှနျ့စားမှုက ဘာလဲ ?
နောကျထပျ ဘာကို လုပျဆောငျမှာလဲ ?
နောကျထပျ ဘယျလိုလမျးမြိုးကို လြှောကျမှာလဲ ?
နောကျထပျ လုပျငနျးက ဘာလဲ ?
နောကျထပျ ဖနျတီးအကောငျအထညျဖျောမယျ့ စီမံကိနျးက ဘာလဲ ?? အစရှိသဖွငျ့ စဉျးစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ရှကေို့ ဆကျတိုးပါ၊ လမျးကွောငျးသဈတှေ ခမြှတျပွီး နောကျထပျတှကွေုံ့ရမှာတှအေတှကျ စိတျလှုပျရှားနလေိုကျပါ။ ဘ၀ကို လှုံ့ဆျောမှုပေးနိုငျတဲ့ ခံစားမှုနှဈခုကတော့ စိတျလှုပျရှားမှုနဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနှဈခုစလုံးကလညျး လုပျသမြှအရာမထငျပဲ ခကျခဲရှုံးနိမျ့နတေဲ့အခါမြိုးမှာ အလှယျတကူပဲ ပြောကျကှယျသှားတတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘယျလိုအခွအေနပေဲ ကွုံနပေါစေ၊ သငျဖွဈခငျြတဲ့ အနာဂတျကို ကွိုတှေးပွီး စိတျလှုပျရှားမှုနဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုကို ထိနျးထားလိုကျပါ။
စိတျလှုပျရှားမှုနဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုကို ဘယျလိုထိနျးထားနိုငျမလဲ။ နောကျထပျလုပျမယျ့အရာကို ပွောပွပါ။ ခရြေးထားပါ။ သငျ့ကိုကူညီပေးနိုငျတဲ့သူတှကေို တိုငျပငျပါ။ နတေို့ငျးကွညျ့နကြေ ကွညျ့မှနျမှာ ကပျထားလိုကျပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့စိတျကူးနဲ့ အတှေးတှကေို နောကျထပျ ရညျမှနျးခကျြတှေ၊ နောကျထပျ လမျးကွောငျးတှပေျေါမှာ သခြောအာရုံစိုကျထားပွီး လှနျခဲ့ပွီးသော ကရြှုံးမှုတှကေို မလေို့ကျနိုငျဖို့ ကွိုးစားပါ။
သငျ့ရဲ့အတှေးတှကေို သငျကိုယျတိုငျပဲ ထိနျးခြုပျရမှာပါ။ အောငျမွငျမှုပဲဖွဈဖွဈ၊ ကရြှုံးမှုပဲဖွဈဖွဈ ကွုံတှရေ့တဲ့အခါတိုငျးမှာ နောကျထပျဘာလုပျမှာလဲဆိုတာကိုပဲ အာရုံစိုကျထားဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ကရြှုံးမှုကွောငျ့ သငျရပျတနျ့နတေော့မှာ မဟုတျပဲ အောငျမွငျမှုဆီကို ရောကျတဲ့အထိ လြှောကျလှမျးသှားနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အပြောနဲ့ အလုပ်မှာ ဘာက ပိုလွယ်လဲဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားပါ။ ဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်တွေ့လုပ်ရတဲ့အခါမှာ ကျရှုံးဖို့အလားအလာတစ်ခု ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်လုပ်ဆောင်တယ်၊ ထင်ထားသလို အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးတယ်။ ဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ကျရှုံးမှုဆိုတာ ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတစ်ခုပါပဲ။
ဒီနေရာ ကျရှုံးမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ လူအများစုက နောင်တတွေရလာတတ်ကြပါတယ်။ ငါတို့ ဒီလိုမလုပ်ခဲ့မိရင်ကောင်းမှာပဲ၊ ဘာလို့များ ဒီလိုလုပ်ခဲ့မိတာလဲ၊ ငါ ဘယ်လောက်တောင် အသုံးမကျလိုက်သလဲ စသဖြင့် နောင်တတွေရပြီး စိတ်မလုံခြုံမှုနဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျစိတ်တွေ များလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒုံရင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီး အဆိုးမြင်စိတ်တွေနဲ့ နောက်တစ်ခါကြိုးစားကြည့်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
လူအများစုအတွက် အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးကတော့ ဘာကိုမှမကြိုးစားကြည့်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က တည်ရှိနေတယ်၊ ပုံမှန်ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းတယ်၊ ထူးထူးခြားခြား ကွဲပြားတာတစ်ခုခုကို လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးကို အသုံးချဖို့ ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားတတ်ကြပါဘူး။ သူတို့က တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဖြတ်သန်းချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အတိတ်မှာကျရှုံးခဲ့တာတွေကြောင့် နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားဖို့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိကမ္ဘာမှာ အအောင်မြင်ဆုံးဆိုတဲ့ လူတွေအားလုံးဟာ ကျရှုံးမှုတွေ အများကြီးကို ဖြတ်သန်းပြီးမှ ဒီနေရာကို ရောက်လာခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ ဘယ်လောက်ထိ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ခဲ့လဲဆိုတာက အံ့သြစရာပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ကျရှုံးမှုတွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့ ဘယ်လိုတောင်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာလဲဆိုတာကို တွေးမိပါလိမ့်မယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ နာမည်ကြီးသမ္မတတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အေဗရာဟင် လင်ကွန်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သမ္မတဆိုတဲ့နေရာကို မရောက်ခင်မှာ ကျရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျရှုံးမှုတွေက သူ့ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအများစုပါပဲ။ ဒီကျရှုံးမှုတွေကပဲ အေဗရာဟင်လင်ကွန်းဆိုတဲ့ ရာဇ၀င်တွင်တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတတစ်ဦးဖြစ်အောင်၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ်ကို အနိုင်တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် Ulysses S. Grant ဆိုရင်လည်း အရှုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ဖူးတာပါပဲ။ သူက မအောင်မြင်တဲ့ အိမ်ပွဲစား၊ လယ်သမား၊ စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အဖေရဲ့ သားရေဆိုင်မှာ လက်တိုလက်တောင်းအလုပ်လေးတွေပဲ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုရင် သူ့ကို နိုင်ငံသူရဲ့ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ ဘယ်သူကမှ ထင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြည်တွင်းစစ်ကို နိုင်အောင်တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ကို အောင်မြင်သူတစ်ယောက်အဖြစ် လူတိုင်းက မြင်လာကြပါတယ်။ တကယ်လို့ သူသာ သားရေဆိုင်မှာပဲ ဘ၀ကို လက်လျှော့နေခဲ့မယ်ဆိုရင် အိမ်နီးချင်းတွေကြားထဲမှာ သူ့အဖေဆိုင်က အခိုင်းအစေတစ်ယောက်ဆိုတာထက် ပိုမြင်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီး နာမည်မကျော်လာခင်က ကျရှုံးမှုတွေ တသီတတန်းကြီးနဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်ခဲ့ရတဲ့ သူရဲ့ကောင်းတွေ၊ အမျိုးသားတွေ အမျိုးသမီးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုအကြောင်း ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ကျရှုံးမှုတွေက ပိုများနေတာကို တွေ့ရမှာ သေချာပါတယ်။
ကျရှုံးမှုရဲ့ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းက ရှေ့ဆက်လှမ်းနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျရှုံးမှုကနေ ရှေ့ကို ဆက်လှမ်းနိုင်ပြီဆိုရင်လည်း အောင်မြင်မှုက ကျိန်းသေပေါက်စောင့်ကြိုနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတိတ်က အောင်မြင်မှု ဒါမှမဟုတ် ကျရှုံးမှုကို ဖက်တွယ်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးမှာ တူညီတာတစ်ခုရှိပါတယ်။ သူတို့အားလုံးက အတိတ်မှာ ရှင်သန်နေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အနာဂတ်ကို အာရုံစိုက်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ဖို့ကိုလည်း အာရုံစိုက်နိုင်ရပါမယ်။ ဒါက နောက်တစ်နေ့ရောက်ပြီ၊ လုပ်စရာရှိတာတွေကို လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးမွေးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကျရှုံးမှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ရှေ့ကိုဆက်တိုးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်လှမ်းတိုးဖို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ –
နောက်ထပ် စွန့်စားမှုက ဘာလဲ ?
နောက်ထပ် ဘာကို လုပ်ဆောင်မှာလဲ ?
နောက်ထပ် ဘယ်လိုလမ်းမျိုးကို လျှောက်မှာလဲ ?
နောက်ထပ် လုပ်ငန်းက ဘာလဲ ?
နောက်ထပ် ဖန်တီးအကောင်အထည်ဖော်မယ့် စီမံကိန်းက ဘာလဲ ?? အစရှိသဖြင့် စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့ကို ဆက်တိုးပါ၊ လမ်းကြောင်းသစ်တွေ ချမှတ်ပြီး နောက်ထပ်တွေ့ကြုံရမှာတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေလိုက်ပါ။ ဘ၀ကို လှုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်တဲ့ ခံစားမှုနှစ်ခုကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုစလုံးကလည်း လုပ်သမျှအရာမထင်ပဲ ခက်ခဲရှုံးနိမ့်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ အလွယ်တကူပဲ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လိုအခြေအနေပဲ ကြုံနေပါစေ၊ သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ အနာဂတ်ကို ကြိုတွေးပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ထိန်းထားလိုက်ပါ။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ဘယ်လိုထိန်းထားနိုင်မလဲ။ နောက်ထပ်လုပ်မယ့်အရာကို ပြောပြပါ။ ချရေးထားပါ။ သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့သူတွေကို တိုင်ပင်ပါ။ နေ့တိုင်းကြည့်နေကျ ကြည့်မှန်မှာ ကပ်ထားလိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ အတွေးတွေကို နောက်ထပ် ရည်မှန်းချက်တွေ၊ နောက်ထပ် လမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာ သေချာအာရုံစိုက်ထားပြီး လွန်ခဲ့ပြီးသော ကျရှုံးမှုတွေကို မေ့လိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
သင့်ရဲ့အတွေးတွေကို သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ထိန်းချုပ်ရမှာပါ။ အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျရှုံးမှုပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါတိုင်းမှာ နောက်ထပ်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာကိုပဲ အာရုံစိုက်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျရှုံးမှုကြောင့် သင်ရပ်တန့်နေတော့မှာ မဟုတ်ပဲ အောင်မြင်မှုဆီကို ရောက်တဲ့အထိ လျှောက်လှမ်းသွားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous: ဘာမဆိုဖွင့်ဟတိုင်ပင်နိုင်တဲ့ ချစ်သူဘ၀ရဲ့ အရေးပါမှု
Next: သင့်အတွက် မှန်ကန်ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်တဲ့ အချက်(၅)ခု